भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र बिचौलिया कर्मचारीले हुर्काएका ‘बतास’हरु — Imandarmedia.com
काठमाडौ। बतास समूहका आनन्दराज बतास र स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीबीचको सम्बन्धबारे पोखरामा एउटा किस्सा छ, आनन्दराज र रवीन्द्र भोट नदिएका तर नोट दिएका साथी थिए।
हेलिकप्टर दुर्घटनामा मुत्यु भएको सातौं दिन २०७५ फागुन २१ मा आनन्दराजले रवीन्द्रको सम्झनामा लेखेका थिए, मैले कहिल्यै भोट नदिएका साथी । त्यो लेखको मर्म हो, पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सँगै पढेका आनन्दराजले रवीन्द्रलाई चुनावमा नोट दिए, भोट दिएनन्।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा केही समयअघि एउटा दृश्य देखियो । कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भइसकेपछिको कुरा हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल हातमा फाइल बोकेर अघिअघि हिंडिरहेका थिए भने पछि पछि थिए,
आनन्दराज बतास । कानून बनाएर पोखराको रामघाटमा सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा गिटी निकाल्न बतासलाई जिम्मा दिन पोखरा महानगर ठिक्क परेको छ ।
बतासलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालकै सबैभन्दा बढी साथ थियो । मेयरको स्वास्थ्यमा समस्या आएर कार्यालय पुग्न नसक्ने भएपछि रामघाटलाई सबै प्रक्रिया पूरा गराएर आफ्नो पोल्टामा पार्न बतास आफैंले दौडधुप गरेका थिए ।
बतासहरु बतास बन्न उनीहरुको मिहिनेतले मात्रै संभव छ ? बतास जस्ता व्यापारीहरुको उत्पादन, मलजल र विस्तार गर्ने को हुन् ? राजनीतिक दल, सरकार, राज्यका अंगहरु निरीह र बतासहरु यति शक्तिशाली कसरी हुनसक्छन् ? सरकारी सम्पदा र सम्पत्ति हडप्न सफल बतासहरुको संरक्षण कसले गर्छ ?
तर ओलीले केहीदिन अघि झापा पुगेका बेला अहिलेको सरकारले नै बतासलाई नारायणहिटी भाडामा दिएको आक्षेप लगाए। अहिलेको सरकार देखिहाल्नुभयो, त्यसको मुख कत्रो रहेछ, नारायणहिटी खप्लक्कै पारिसक्यो नारायणहिटी नै खान लागेको भनेपछि रामायणकी पात्र शूपर्णखाको भन्दा ठूलो मुखमा नारायणहिटी निल्न थाले’ ओलीले भनेका छन्,
‘पहिले आफ्नो मति सपार । बतासलाई संचारमाध्यममा बोलाएर, अन्तर्वार्ता लिएर म त केपी ओलीको ज्वाईं हो भन्न लगाउने । मेरो त छोरी देशभरि छन् छोरीसित बिहे गरे ज्वाईं त हुने नै भए । यस्ता हल्ला चलाएर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न खोज्ने ?
झापाको भद्रपुर ससुराली रहेका बतासले आफूलाई ओलीले ज्वाईं भन्ने गरेको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन्। नेपाल ट्रष्टको कानून नै संशोधन गरे यति होल्डिङ्सलाई सार्वजनिक जग्गा सुम्पिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको सरकारको साझेदार नै थियो । बतास प्रवृत्तिसँग नजिक प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र यो विषयमा पनि मौन छ।
बतासले कांग्रेसलाई आर्थिक सहयोग गरे, देउवाको किचन क्याबिनेटमा आरजु राणासँगै भएर प्रभाव जमाए । एमालेका नेताले पनि बतासबाट सहयोग लिए र उनकै स्वार्थअनुसार संरक्षण पाए । त्यही राजनीतिक आडमा स्वार्थ मिल्ने कर्मचारीसँग पनि उनको साँठगाँठ भयो, सुरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा समेत उनले प्रभाव जमाउन सके ।
न्यायालय प्रभावित भएको देखे । थुप्रै घटनामा अख्तियारले पनि आँखा चिम्लिदिएको नजिकबाट बुझे । यी सबै कुराको गठजोडमा बतासहरुले फाइदा लिन सफल भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
‘हाम्रो न्यायालय, जसले यस्ता विषयमा चेक गर्नुपर्छ । अख्तियारले लिएर गएको मुद्धामा अदालतले उन्मुक्ति दिएका घटना पनि ताजै छन् । आर्थिक हिसाबले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरामाथि नै प्रश्नहरु यद्यपि छन्,’ पराजुली भन्छन्, ‘यसबाट के थाहा हन्छ भने अहिलेको नेक्सस चौतर्फी छ।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको दाबी छ, ‘बतासहरुको उत्पादन र मलजल गर्ने नेपालकै राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र र सरकारकै अंगहरु हुन्। त्यतिमात्रै होइन, बाैद्धिक वर्ग र जनताहरुको पनि उत्तिकै हात छ । कसले, कसरी देश चलाइरहेको छ भने सार्वजनिक बहस र विमर्श नै गर्दैनौं।
मिश्रका अनुसार जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति आम बनिसक्यो। फेवातालकै प्रतिवेदनहरुले त्यही भन्छ। बालुवाटार वा ललिता निवासका जग्गाको घटना र प्रतिवेदनहरुले पनि त्यही भन्छ’ मिश्र भन्छन्, ‘पशुपति, नारायणहिटी जस्ता थुप्रै घटनामा कोही दोषी नै देखिएपनि हेर्नुहोला, कोही कारबाहीमा पर्दैन । किनकि यी काम कुनै एक जना व्यापारीको जोडबलले मात्र भएको छैन।
यस्ता काण्डहरुमा मिहिन अध्ययन गरेर निष्पक्ष प्रतिवेदन नै तयार नहुने उनको अनुभवले बताउँछ। कथ‌ं प्रतिवेदन तयार नै भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमै जान नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । ‘एकातिर प्रतिवेदन नै लेख्नु पनि ठूलो कुरा भयो, अर्कोतिर ती प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमै नजाने भयो । विरलै प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा गएका छन्’ मिश्र भन्छन्, ‘सार्वजनिक कुलो, जग्गा, चउर मिच्ने आम वातावरणमा हुर्किएको विरुवा हो, बतास । उसले कहाँ खेल्नुपर्छ थाहा पायो, जसरी अरुले थाहा पाएका थिए ।’
लोकतन्त्रको असल अभ्यास बलियो नभइकन यो प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने मिश्रको दाबी छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अंग, कर्मचारीतन्त्र र जनता पनि नसुध्रिइकन लोकतन्त्र सुध्रिंदैन’ मिश्र भन्छन्, ‘जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र सबैजसो दलहरुले भनिरहेको समाजवादको यात्रासँग बतासहरुको सम्बन्धले कस्तो समाजवादमा जाने हो ? म बुझ्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो खालको लोकतन्त्रले मच्चाउने भनेकै लुट हो भन्दै मिश्रले जनताले आस्था राखेको लोकतन्त्र धमिलो गएको बताए । अहिले बतास चर्चामा छ, १५ दिनपछि बोल्नेहरु थाक्छन्,
लेख्नेहरुका कलम अर्कै विषयमा कुद्छ र बतासले जे गर्न खोजिरहेको त्यो गरिरहन्छ, सबैभन्दा बलियो सम्भावना यही हो’ मिश्रले सिंगो पद्धतिप्रति नै व्यंग्य गरे, ‘भोलि यसले यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रले आहतबाहेक केही दिएन भन्ने आयो भने हामी सबै हो हो भन्नेतिर जानेछौं।